५० वर्षपछि सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ओली – मलाई पनि च्याब्रुङसँगै नाचौँ नाचौँ लाग्यो « Mechipost.com
५० वर्षपछि सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ओली – मलाई पनि च्याब्रुङसँगै नाचौँ नाचौँ लाग्यो
प्रकाशित मिति: ११ फाल्गुन २०७६, आईतवार २१:३७
यासोक (पाँचथर), ११ फागुन
पूर्वी पहाडसँग राम्रोसँग साक्षात्कार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतवार पाँचथरको कुम्मायकको यासोकमा खानेपानी आयोजना र विद्युतिकरण उद्घाटन गर्न पुग्दा दङ्ग हुनुभयो । आफू ५० वर्षअघि कुम्मायककै यासोकमा पुग्दा तमोरबाट डोकोमा बोकेर खानेपानी प्रयोग गर्नुपर्ने विकराल अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गर्नुभयो ।
“५० वर्षअघि यो बाटो हिँड्दा तल सिटौलाको पुल तरेर रानीगाउँसम्म आइपुग्दा त्यो उकालोमा डोकामा पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने कुरा मैले देखेको छु, मैले भोगेको थिएँ । यी ठाउँहरुमा कसरी खानेपानी पुर्याउने होला भन्ने त्यो चिन्ता थियो” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
यी स्थानमा विजुली, बाटो र खानेपानी पुगेकोमा खुसी ब्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “यहाँ मोटरहरुबाट हिँड्न पाउँदा, यहाँ खानेपानीको धारा सरर बग्न पाउँदा, यहाँ विद्युत उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई त अघि नै च्याब्रुङसँगै नाचौँ नाचौँजस्तो लागेको थियो ।” उहाँले यो अवस्था आफ्ना लागि औधी खुसीको क्षण रहेको वताउनुभयो ।
यासोक वृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा वार्षीक रु. १ करोड २० लाख शुल्क उठ्ने र उक्त शुल्क तिर्न कठीन पर्ने भन्दै मिनाह गरिदिन स्थानीयवासीले माग गरेका थिए । उक्त मागमा सकारात्मक प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “देश अलि सम्पन्न भएपछि विद्युत शुल्क तिर्न पनि कुनै समस्या पर्दैन् । तैपनि म सकारात्मक छु ।”
खानेपानीको समस्या हल भएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुम्मायकका महिलाहरुलाई बधाई दिनुभयो । “खासगरी दिदीवहिनीहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु, जसले टाढाबाट दुःखका साथ पानी बोकेर ल्याउनुपथ्र्यो । आवश्यक पर्नेजति पनि पानी खर्च गर्ने बेलामा ढाड भाचिनेगरी पानी बोक्दाको दुःख सम्झनुपथ्र्यो । त्यो अब हटेको छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले कुम्मायकको यासोक सहित पूर्वी पहाड अब पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने वताउँदै पूर्वाधार तयार पार्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्नुभयो । राँके–रबी–भेडेटार सडक र दमक–चिसापानी–रबी सडकले एक÷दुई घण्टामै पूर्वी तराईबाट यहाँ आउन सम्भव भएको वताउँदै प्रधानमन्त्रीले पर्यटकलाई न्यायो आतिथ्यको ब्यवस्था गर्न स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“अब म सुझाव भन्न चाहन्छु, यो ठाउँ मान्छेले आराम, रमाइलो गर्न, स्वच्छ वातावरणमा आउने, अर्गानिक उत्पादन खान आउने, न्यानो आतिथ्यबाट लोभिएर आउने दिन बन्दैछ । त्यसैले राम्रा रेष्टुरा, राम्रा लज खोल्नुस्” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “अब तीन वर्षभित्र तराईका मान्छे यहाँ आइपुग्छन् । गर्मीको बेला यहाँको लजमा बास बस्नु, त्यो भन्दा आनन्द के होला ? उता हपहप गर्मी भएको हुन्छ, यहाँ आएपछि शितल हावा, कञ्चनजंघा, कुम्भकर्णबाट बगेर आएको, फिल्टर गरिएको स्वच्छ पानी त्यो खान पाइने ठाउँ बन्छ यो ।”
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको ६९औँ जन्मदिनको अवसरमा सामूहिक शुभकामना समेत ब्यक्त गरिएको थियो ।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक आफ्नो एपेन्डिक्सको उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकहरुलाई नागरिकमाझ परिचय गराउनुभयो । “मसँग साथीहरु मध्ये केहीलाई चिनाउनु उपयुक्त हुन्छ” भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एपेन्डिक्सको उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकहरुबारे करीब पाँच मिनेट परिचयात्मक मन्तब्य ब्यक्त गर्नुभयो ।
“म अचानक गम्भीर विरामी परेको थिएँ । अचानक ठूलो अपरेसन गरेर उपचार गर्नुपर्ने डाक्टर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, डा. रमेशसिंह भण्डारी । उहाँ पाँचथरकै पल्लो छेउ वैतडीको वासिन्दा हुनुहुन्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले डा. दिलिप शर्मा लगायत चिकित्सकहरुलाई परिचय गराउँदा सहभागीहरुले तालीले स्वागत गरेका थिए ।